राजा महेन्द्रले यि भारतीय सेनाध्यक्ष कोदन्देरालाई भेटेपछि बिपीलाई जेल हाले र कू गरे !::Pathivara News
काठमाडौ भारतीय सेनाध्यक्ष के एस थिमैया भारतीय राजनीतिक र सैन्य इतिहासमा गौरवशालीपात्रका रुपमा चिनिन्छन् । भारतले थिमैयाकै सैन्य कमाण्डमा चीनसँग युद्ध लडेको थियो । कर्नाटकमा जन्मिएका कोदन्देरा सुबय्या थिमैयाले दोस्रो विश्वयुद्ध तथा कोरियन युद्धमा पनि सहभागी भएका थिए । बहादुरी उनको नामसँग जोडिने गर्दछ ।
यिनै सेनाध्यक्षसँग नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण पाटो पनि जोडिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतसहितको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्त गर्न यिनको पनि भूमिका रहेको बताइन्छ । मंसिर २८, २०१७ मा सेनाध्यक्ष थिमैया नेपालको ठोरी जङ्गलमा शिकारका लागि आएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालासँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारतीय राजदुत भगवान सहायको सक्रियता ह्वात्तै बढ्यो । उनले ठोरीको चारकोशे झाडीमै राजा महेन्द्र र भारतीय सेनाध्यक्ष थिमैयाको भेट गराए ।
त्यसको दुई दिनपछि अर्थात पुस १, २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । पञ्चायतको शुरुवात त्यहीबाट भयो । नेपालको राजनीतिका बाघपात्रका रुपमा चिनिने राजा महेन्द्र र विपी कोइरालाका बीचमा सहज सम्बन्ध स्थापित भइ राजनीति अघि बढेको भए के हुन्थ्यो ? इतिहासविद रमेश ढुंगेलका शब्दमा अभुतपूर्व गति लिन्थ्यो देशले । राजा महेन्द्रले विपीमाथि अराष्ट्रिय तत्वको प्रभावमा परेको आरोप बर्षाएका थिए । तर, रहस्यमय ढंगले उनले भारतीय सेनाध्यक्षसँगा भेट गरी विपीलाई बर्खास्त गरे ।
इतिहासविद ढुंगेलका अनुसार भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुसमेत विपीको व्यक्तित्व र नेतृत्वसँग हच्किएका थिए । दक्षिण एसियाली राजनीतिमा आफु ओझेलमा पर्ने भयका कारण नेहरुलगायतका भारतीय नेताहरुले विपीको राजनीतिमा कैँचै चलाएको ढुंगेलको विश्लेषण छ । यसको अर्थ राजा महेन्द्रको कदमलाई बेठीक भन्न नसकिने ढुंगेल तर्क गर्छन । देश निर्माणको चरणमा रहेकाले महेन्द्रले देशलाई जोगाउन सो कदम चालेको उनको भनाइ छ । नेपालको राजनीतिक कोर्समा भारतको भुमिका त्यतिबेला जबरजस्त थियो । राजा, राणा र काँग्रेसलाई दिल्लीमा सम्झौता गराउन नेहरुले हप्कीदप्कीपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका थिए । उनै नेहरु विपीलाई अपदस्त गर्दा चुपप्राय रहे ।
राजा महेन्द्र र तत्कालिन भारतीय सेनाध्यक्ष कोदन्देरा
दिल्लीले राजाको कदमलाई बेठीक भन्ने आसयको विज्ञप्ति जारी गर्दै टारिदियो । राजा महेन्द्रकै कालमा कालापानीमा भारतले कब्जा जमायो । तर, भारतीय स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै महेन्द्रले चीनसँग जोड्ने कोदारी राजमार्ग शुरु गरे । जसको निर्माणले भारतमा हल्लिखल्ली मच्चियो । तिब्बत र नेपालको सीमाक्षेत्रमा नेपाली भूमीमा तैनाथ भारतीय सेना हटाउन महेन्द्रको चातुर्याइले काम गर्‍यो । यस अर्थमा हेर्दा महेन्द्र नायक देखिन्छन् । महेन्द्रको राष्ट्रवाद आजकल धेरै बहशको विषय बनेको छ । पत्रकार नारायण पौडेलले इतिहासविद् रमेश ढुंगेलसँग महेन्द्र नायक की खलनायक भन्ने बहश गरेका छन् । सो बहशमा ढुंगेलले महेन्द्रलाई नायक नै मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।